Medical Writings ဆေးပညာစာများ: G6PD မွေးရာပါရောဂါ
ကျွန်မရဲ့သားလေးကို ဒီလ ၁၈ ရက်နေ့က ခွဲပြီး မွေးပါတယ်။ ကျွန်မသားလေးမှာ G6PD (Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency) ဆိုတဲ့ဟာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အသားဝါလည်းဖြစ်လို့ ဆေးရုံမှာ ၅ ရက်လောက် နေခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ G6PD အကြောင်းအသေးစိတ် ရှင်းပြပေးပါနော်။ ဒီမှာ မလေးလို ရေးထားတဲ့ လက်ကမ်း ကြေငြာလေးနဲ့ပဲ ဆရာဝန်တွေက ရှင်းပြပါတယ်။ (အသေးစိတ်မရှင်းပြပါဘူး)။ တောင်ကြီးပဲ၊ ပရုတ်လုံးနဲ့ တိုင်းရင်း-ဆေးတွေကို ရှောင်ပါလို့ပဲ ပြောပါတယ်။ ဘယ်လို တိုင်းရင်းဆေးတွေကို ရှောင်ရပါမလဲဆရာ။ မီးနေသည်တွေ သုံးတဲ့ တိုင်းရင်းဆေးတွေရော ပါပါသလား။ အဲဒီ G6PD က ကလေးအတွက် အန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါသလား။ အဲတာ ရှောင်ရန်-ဆောင်ရန်လေးတွေကို ရှင်းပြပေးပါနော်။
မွေးကတည်းက G6PD (အင်ဇိုင်း) ချို့ယွင်နေတဲ့ ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘ တဦးဦးကဖြစ်ဖြစ် ၂ ဦးလုံးက ဖြစ်ဖြစ် မျိုးဗီဇ ရလာလို့ သူ့ X chromosome မှာ လာထိခိုက်တယ်။ တကမ္ဘာလုံးမှာ သန်း ၄ဝဝ ဖြစ်နေတယ်။ ငှက်ဖျား ရောဂါ ရှိတဲ့ နေရာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။ များသောအားဖြင့် ကလေးတွေမှာ ဒီရောဂါရှိနေတာ မသိကြဘူး။ ကလေး ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက ဒီလိုရှိနေတာ သိသူတွေက ကံကောင်းကြပါတယ်။
G6PD (အင်ဇိုင်း) ဆိုတာ Carbohydrates (ကဇီဓါတ်) ကနေ Energy အင်အား ဖြစ်စေရာမှာ ကူညီတယ်။ Red blood cell (RBC) သွေးနီဥကို တခုခု ဖြစ်သွားစေမှာကိုလဲ သူကနေ အကာကွယ် ပေးတယ်။ G6PD နည်းနေရင် အကာကွယ် လုံလောက်အောင် မပေးနိုင်တော့ဘူး။ အဲလိုဖြစ်လာရင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီကနေ သွေးနီဥတွေ ထုတ်ပေးနေတာက မလုံလောက်တော့တဲ့အခါ သွေးအားနည်းရောဂါ ဝင်လာမယ်။
ကမ္ဘာ့-ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နေ အမျိုး ၅ ခုခွဲထားတယ်။ ဆိုးတာကနေ စတယ်။
1. သွေးအားနည်းနေပြီး ၁ဝ% အောက်မှာသာ အလုပ်လုပ်နိုင်သူ။
2. သွေးအားနည်းတာ ဖြစ်လိုက်-သက်သာလိုက်နဲ့ ၁ဝ% အောက်မှာသာ အလုပ်လုပ်နိုင်သူ။
3. သွေးအားနည်းတာ တခါတလေသာ ဖြစ်ပြီး ၁ဝ-၆ဝ% အလုပ်လုပ်နိုင်သူ။
4. လက္ခဏာ မပြသေးသူ။
အများအားဖြင့် ဘာရောဂါ လက္ခဏာမှ မပြဘဲ နေတတ်တယ်။ လက္ခဏာ ပြလာသူတွေက ယောက်ျားလေးတွေသာ ဖြစ်တယ်။ Neonatal jaundice မွေးကင်းစမှာ အသားဝါက ကြာရှည် ဖြစ်သူတွေက ရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်နေတတ်တယ်။ မွေးရာပါမို့ ပျောက်အောက်တော့ ကုမရပါ။
လူကောင်းလို နေတဲ့ကလေးဟာ ခလုပ် ဆွဲဖြုတ်လိုက်သလို အခြေအနေမျိုး ရှိလာရင် ရောဂါလက္ခဏာ ပြလာမယ်။
ဘာမှ မဖြစ်သလိုကနေ Hemolysis သွေးနီဥတွေကို ဖျက်ဆီးလို့ Hemolytic anemia သွေးအားနည်း ရောဂါ ဖြစ်လာ နိုင်တယ်။ အသားအရေ ဖြူရော်ရော်ဖြစ်လာမယ်။ မောပမ်းမယ်။ နှလုံးခုန်မြန်မယ်။ အသက်ရှူ မဝဘူး။ အသား ဝါမယ်။ ဆီးအရောင် ရင့်မယ်။ ဘေလုံး ကြီးလာမယ်။
ရောဂါကို Favism လို့လဲ ခေါ်တယ်။ ဒီရောသည်တွေကို ကူညီဘို့ Favism association ဆိုပြီး အသင်းဖွဲ့ထားတယ်။ သူတို့ကနေ မတည့်တဲ့ ဆေးနာမယ်စာရင်းကို အပြည့်အစုံ ပြောပြထားလို့ ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ ဘာဆေးတွေဆိုတာ တခုခြင်းတော့ မရေးတော့ပါ။ သိလိုသူ မေးပါ။
G6PD နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ဆရာ့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ သမီးသိပ်မရှင်းတဲ့ အချက်လေးတွေကို မေးခွင့်ပြုပါနော်။ ကျွန်မသားလေးကို 18.9.2010 မှာမွေးပါတယ်။ အသားဝါလို့ ဆေးရုံမှာ ၅ ရက်နေပြီး 23.9.2010 မှာ Jaundice Level 13.5 နဲ့ဆေးရုံက ဆင်းပါတယ်။ နောက်ရက်တွေမှာ ဆေးခန်းမှာ သွေးစစ်ခိုင်းတော့ 13.8၊ 14.8၊ နဲ့ 27.8.2010 မှာ 17.9 ဖြစ်လို့ ဆေးရုံပြန်တတ်ရပါတယ်။ 28 ရက်နေ့မှာ 12.2 ပြန်ကျသွားလို့ ဆေးရုံက ပြန်ဆင်းပါတယ်။ ဒီနေ့သွေးထပ်စစ်တော့ 10.9 ရှိပါတယ် နောက် ၁လမှ ထပ်ချိန်းပါတယ်။ အဲတာ အသားဝါးဖြစ်တာ စိတ်ချရတဲ့အနေအထား ဖြစ်သွားပြီလားဆရာ။ ထပ်ရောဖြစ်နိုင်သေးလားဆရာ။
Neonatal jaundice အသားဝါက ပြန်မဖြစ်ပါ။ ကလေးကို ရေများများ တိုက်ပါ။ မနက်ခင်း နေရောင်ပြပါ။ နီယွန်မီးချောင်း Neon light နဲ့ထားပါ။
1. G6PD ရှိတဲ့ကလေးက သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်ကိုဖြစ်တာလား။ အဲသလိုမဖြစ်အောင်မည်သို့ ကာကွယ်ရပါသလဲရှင့်။ လူကောင်းလို နေတဲ့ကလေးဟာ အောက်ပရေးထားတဲ့ အခြေအနေ ၄ ခုရှိရင် ရောဂါလက္ခဏာ ပြလာမယ်။
၂။ တချို့ဆေးဝါးများ၊ တချို့ကလေးတွေက အဲလိုဆေးဝါး နဲနဲပေးတာကို ခံနိုင်တတ်တယ်။ တချို့က နဲနဲလေးမှ မရဘူး။
၃။ Broad beans ပဲ စားသုံးတာ။
2. G6PD ရှိတဲ့ကလေးဟာ တစ်ခြားကလေးတွေလိုပဲ ပုံမှန်အလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသလား။ အသက်ကြီးလာလို့ ကိုယ်ခံအား ကောင်းလာရင် အဲဓါတ်ချို့တဲ့မှု ပျောက်သွားနိုင်ပါသလား။
3. G6PD ဖြစ်တဲ့ကလေးက ဘယ်လိုရောဂါတွေခံစားရနိုင်ပါသလဲ။ သူနဲ့မတည့်တဲ့ ဆေးအစာတွေစားမိရင် ချက်ချင်း ရောဂါဖြစ်ပါသလား တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြစ်ပါသလား။ ရောဂါလက္ခဏာ ဘယ်လိုပြပါသလဲ။ ဘယ်လိုအခြေအနေက ကလေးအတွက် အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။
ဘာမှ မဖြစ်သလိုကနေ Hemolysis သွေးနီဥတွေကို ဖျက်ဆီးလို့ Hemolytic anemia သွေးအားနည်း ရောဂါ ဖြစ်လာ နိုင်တယ်။ ဖြစ်လာရင် အသားအရေ ဖြူရော်ရော်ဖြစ်လာမယ်။ မောပမ်းမယ်။ နှလုံးခုန်မြန်မယ်။ အသက်ရှူ မဝဘူး။ အသား ဝါမယ်။ ဆီးအရောင် ရင့်မယ်။ ဘေလုံး ကြီးလာမယ်။ ရောဂါလက္ခဏာ ပြစေမှာတွေကို ရှောင်ကျဉ်-ဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့ ရက်သတ္တ ၁-၂ ပါတ်အတွင်း သက်သာလာမယ်။ သိပ်မဆိုးရင် ဆေးကုစရာတောင် မလိုပါ။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေ သွေးနီဥသစ်တွေ ထုတ်လုပ်ပေးနေလိမ့်မယ်။ လိုအပ်ရင် သွေးသွင်းရတယ်။
4. ပရုတ်လုံးတစ်ခုတည်းနဲ့မတည့်တာပါလား ပရုတ်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှနှင့်မတည့်တာလား။ (ဥပမာ မြန်မာဆေး ဆရာခို၊ ပရုတ်ဆီ) (Menthol, Mint) သွားတိုက်ဆေး စတာတွေရော အကြုံဝင်ပါသလားရှင့်။ တစ်ချို့က ပြောပါတယ် ဆေးတွေဘာတွေကို လူးရင်ရတယ် သောက်ရင် မရဘူးပြောတယ် အဲတာ မှန်ပါလား။
ပရုတ်ပါရင် မတည့်ပါ။ အနံ့ကအစ မတည့်ပါ။ သောက်ရင် ပိုဆိုးတယ်။ လူးတာကလဲ သွေးထဲဝင်သွားတာဘဲ။
5. တိုင်းရင်းဆေးတွေနဲ့မတည့်ဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။ မြန်မာဆေးတွေ အကုန်လုံး ပါပါသလား။ ဘယ်လို တိုင်းရင်းဆေးတွေကို ရှောင်ရပါမည်နည်း။ ကလေးကို နို့တိုက်နေချိန်မှာ မိခင်ပါ ကလေးနဲ့ မတည့်တာတွေ ရှောင်ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မီးတွင်းက ထွက်ရင် အပူအပုတ်တွေကင်းအောင် မြန်မာဆေးမီးနေသည် ဆေးတွေသောက်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲတာတွေ မသောက်ရင် နောက်ကြာရင် အဆစ်အမြစ်တွေဘာတွေ ကိုက်တာတွေ တစ်ခြားဟာတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြတယ်မှန်ပါသလား။ ကျွန်မမှာ သားလေးနဲ့မတည့်လို့မှာစိုးလို့ ဘာဆေးမှလည်းမသောက်ရဲဘူး ရောဂါတွေ ဖြစ်မှာလည်း ကြောက်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကပြောတာတော့ ကလေးနဲ့မတည့်တဲ့ဆေးတွေ သောက်တဲ့နေ့ ကလေးကို နို့မတိုက်နဲ့ နောက်ရက်မှတိုက်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ အဲတာ မှန်ပါသလား။ ဆေးတစ်ခုဟာ လူခန္ဒာကိုယ် သွေးထဲမှာ ဘယ်လောက်အချိန်ထိ အကျိုးသက်ရောက်ပါသလဲ။ ဘယ်သို့ လုပ်ရမည်ကို အကြံပေးပါအုံးဆရာ။
တိုင်းရင်း-မြန်မာဆေးတွေထဲမှာပါတာတွေ အကုန်မသိပါ။ ဒီတော့ ရှောင်ရင်ကောင်းပါမယ်။ မီးတွင်းမှာ ဆရာတို့ ပေးတဲ့ ဆေးလို့ ပေးထားပြီးဖြစ်ရင် တိုင်းရင်းဆေးတွေ မလိုအပ်ပါ။ နို့ထဲကို ဝင်နိုင်တဲ့ အစား-ဆေးနဲ့ မဝင်နိုင်တဲ့ အစာ-ဆေးတွေ ရှိကြတယ်။ ကလေးကို မတည့်မဲ့ ဆေးနာမယ်တွေကို မှတ်ပြီး ကိုယ်လဲ ရှောင်ပါ။
6. အင်္ဂလိပ်ဆေး ရှောင်ရမယ့်ဆေးတွေကများတော့ ကျွန်မတို့မြန်မာတွေ အသုံးများတဲ့ဆေးတွေထဲက ရှောင်ရမည့် ဟာလေးတွေကိုပဲ ဖော်ပြပေးပါနော်။
Acetanilide (ရာဘာ ထုတ်လုပ်ရာတွင် သုံးသည်), Acetylphenylhydrazine (polycythemia ရောဂါအတွက်ဆေး), Acetylsalicylic acid (Aspirin), Aminophenazone (အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး), Antazoline (အလာဂျီ သက်သာဆေး), Arsine (ဓါတုလက်နက်သုံး ဓါတ်ငွေ့), Beta-Naphthol (ဆိုးဆေး), Chloramphenicol (ပဋိဇီဝဆေး), Chloroquine (ငှက်ဖျားဆေး), Ciprofloxacin (ပဋိဇီဝဆေး), Colchicine (ဂေါက်ဆေး), Dapsone (အနာကြီးရောဂါ ဆေး), Dimercaprol (အာဆင်းနစ်၊ ရွှေ၊ ပြဒါး အဆိပ်သင့်ခြင်းတို့အတွက်ဆေး), Diphenhydramine (အလာဂျီ ဆေး), Dopamine (ပါကင်ဆွန်ရောဂါ၊ သွေးတိုးဆေး), Doxorubicin (ကင်ဆာဆေား), Furazolidone (ပဋိဇီဝဆေး), Glibenclamide (ဆီးချိုဆေး), Glucosulfone (အရေပြားနာဆေး), Isobutyl Nitrite (ရှူဆေး), Isoniazid (တီဘီဆေး), Menadione (ဗီတာမင်ကေ), Mepacrine (သံချဆေး), Mesalazine-5-Aminosalicylic Acid (အူရောဂါဆေး), Methyltioninium Chloride (methylene blue) (ငှက်ဖျား၊ ကင်ဆာ၊ အဆိပ်ဖြေဆေး), Nalidixic Acid (ပဋိဇီဝဆေး), Naphtalene (ပရုပ်), Niridazole (သန်ချဆေး), Nitrofural (ပဋိဇီဝဆေး), Nitrofurantoin Nitrofurantoin, Norfloxacin (ပဋိဇီဝဆေး), Urate (ဂေါက်ရောဂါတွင်ဖြစ်သည့်ဆား), Pamaquine (ငှက်ဖျားဆေး), Para-Aminobenzoic Acid (အစာလမ်းရောဂါ၊ အရေပြားနာဆေး), Paracetamol (ပါရာစီတမော အကိုက်-အဖျားဆေး), Pentaquine (ငှက်ဖျားဆေး), Phenacetin, Phenazone, Phenazopyridine, Phenylbutazone, Phenytoin, Phynylhydrazine, Primaquine (ငှက်ဖျားဆေး), Probenecid, Procainamide, Proguanil (ငှက်ဖျားဆေး), Pyrimethamine, Quinidine, Quinine (ငှက်ဖျားဆေး), Stibophen, Streptomycin (ပဋိဇီဝဆေး), Sulfacetamide (ပဋိဇီဝဆေး), Sulfacytine (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfadiazine (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfadimidine (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfafurazole (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfaguanidine (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfamerazine (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfamethoxazole (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfamethoxypyridazine (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfanilamide (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfapyridine (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfasalazine (ပဋိဇီဝဆေး), Salazosulfapyridine (ဆာလ်ဖါဆေး), Thiazosulfone Thiazosulfone, Tiaprofenic Acid (အနာ-အဖျားဆေး), Tolonium Chloride (ဆိုးဆေး), Trihexyphynidyl (ပါကင်ဆိုနဇင်ဆေး), Trimethoprim (Septin ထဲပါသည့် ပဋိဇီဝဆေး), Trinitrotoluene (ဖေါက်ခွဲပစ္စည်း), Tripelennamine (စိတ်ရောဂါဆေး), Vitamin C, Vitamin K1, Vitamin K3, Vitamin K4
သတိထားရမှာက ကိုယ်ပူ-ကိုက်ခဲရင် Paracetamol မတိုက်ပါနဲ့။ အားဆေးဆိုပြီး ဗီတာမင် C နဲ့ K မတိုက်ပါနဲ့။ ငှက်ဖျားဆေး Chlorguanidine, Chloroquine, Quinine တွေ မတိုက်ပါနဲ့။ တိုက်ဖွိုက် စတဲ့ရောဂါကို ပေးတတ်တဲ့ Chloramphenicol ဆေး လုံးဝရှောင်ပါ။ တီဘီဆေး Streptomycin, Isoniazid (INH) မတည့်ပါ။ ဆာလ်ဖါဆေးတွေ အားလုံးမတည့်ပါ။ ကလေးအတော်များများပေးတတ်တဲ့ Septrin မတည့်ပါ။